कर्मचारी अभावले समस्या परेको छ, आठ वटै वडामा वडा सचिव हुनुहुन्न: दोर्ण खत्री, चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष – Gulminews
Home/अन्तर्वाता/कर्मचारी अभावले समस्या परेको छ, आठ वटै वडामा वडा सचिव हुनुहुन्न: दोर्ण खत्री, चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष
गुल्मीन्युज Follow on Twitter Send an email २०७६ बैशाख ३०, सोमबार २०:४७ मा प्रकाशित
गुल्मीका १२ स्थानीय तहहरुमध्ये चन्द्रकोट गाउँपालिका पनि एक हो । जनतालाई छिटो–छरिदो सेवा दिने भनी संघियता कार्यान्वयनको चरण अन्तगत स्थानीय तह गठन गरिएतापनि चन्द्रकोट गाउँपालिका भने सचिवविहिन बनेको छ । भएको कर्मचारी सबै समायोजनमा गएपछि सचिवविहिन गाउँपालिका बन्न पुगेको हो । तरपनि गाउँपालिकाले समृद्ध गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य भने जारी राखेको छ । प्रस्तुत छ, चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दोर्ण खत्रीसँग हुमाकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानी:
यो पनि पढ्नुस्: यसपाली राम्रा काम गरेनौँ भने जनताको नजरमा कहिल्यै राम्रो बन्न सक्दैनौं: भूपाल पोखरेल, धुर्कोट गापा अध्यक्ष
१. गाउँपालिकाको अहिले सम्म गरेका मुख्य काम बताइदिनुस न ।
हामिले सुशासनमा जोड दिएका छौ । सर्वप्रथम त कार्यालय स्थापना हुँदा र त्यसको व्यवस्थापनमा नै धेरै समय खर्च भयो । त्यसपछि पनि थुप्रै काम गरेका छौ । शिक्षा क्षेत्रमा सवै विद्यालयमा वाल विकास केन्द्रलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गरेका छौ । विद्यालयहरुलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सवै विद्यालयमा विधुतीय हाजिरी जडान, कम्युटर र प्रिन्टर वितरण, एक विद्यालय एक बगैँचा निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेका छौ । स्मार्ट स्वास्थ्य चौकी निर्माण, सवै स्वास्थ्य चौकीमा फर्निचर व्यवस्थापन, औषधी उपलब्धता, सुक्ष्म स्वास्थ्य शिविर लगायतका काम सम्पनन गरिसकेका छौ । त्यस्तै कृषि र पशुमा उत्पादन बढाउन आधुनिक औजारको वितरण गरेका छौ । सवै वडाबाट गाउँपालिका केन्द्र सम्म पुग्ने १÷१ वटा मुख्य सडकको स्तरोन्नती गरी पिच कार्य सुरुवात गरेका छौ । एक घर एक धारा निर्माण, पर्यटकिय र धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्दन कार्यक्रमहरु पनि संचालन भइरहेका छन् ।
२. गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि आफुले गरेका कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पुरै सन्तुष्ट त को र कहिले हुन सकिन्छ र ! जनविश्वास टुटाउने काम गरिएको छैन । सकरात्मक छु । जनताले हाम्रो अध्यक्ष भनेर गर्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा लागिपरेको छु ।
४. स्थानीय सरकार संचालनको मुख्य दायित्व के रहेछ ?
स्थानीय सरकार संचालनको मुख्य काम नै नागरिकलाई सेवा दिने हो । नागरिकको नजिकको सरकार भएकोले नै सेवा प्रवाहबाट नागरिकलाई सुखी र खुशी दिनु हो । ठूला ठूला भौतिक निर्माणको आशा देखाउनु भन्दा पनि स–साना कामवाट नै वास्तविक सुखी नागरिकमा आउने हुदाँ स्थानीय सरकारले यस्ता कुराहरुमा ध्यान पु¥र्याउनुपर्ने रहेछ ।
४. गाउँपालिकामा पर्याप्त मात्रमा कर्मचारी छन् कि छैनन् ?
५ नं. प्रदेशको शुरुबाटै सवैभन्दा थोरै कमैचारीबाट संचालित हो चन्द्रकोट गाउँपालिका । हाम्रो अवस्था संवेदनशील छ । अझ कर्मचारी समायोजन पछि त झन हाम्रो अवस्था निकै दयनिय भएको छ । आठ वटै वडामा वडा सचिव हुनुहुन्न । गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, सहलेखापाल र दुई जना खरिदार हुनुहुन्छ । प्राविधिक शाखामा करारका कर्मचारी हुनुहुन्छ । जम्मा ३६ जना कर्मचारी हुनुपर्नेमा गाउँपालिकामा अति न्यून मात्रामा कर्मचारी हुनुहुन्छ । जसले गर्दा जनतालाई सेवा दिन निकै कठिन परेको छ ।
५. कर्मचारी अभावले के र कस्ता काममा समस्या परेको छ ?
कर्मचारी अभावको मुख्य समस्या त बजेट कार्यान्वयनमा नै हो । मैले माथि भने जस्तै स्थानीय सरकारको पहिलो काम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नु नै हो । तर कर्मचारी अभावले चुस्त दुरुस्त काम गर्नमा असर पर्ने नै भयो । काम गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्न । तर जनताले जनप्रतिनिधिले काम गरेनन् भन्छन् । यि र यस्तै समस्या खेप्दै आएका छौ ।
६. त्यसो भए अहिले कसरी काम चलाउनु भएको छ ?
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा भएका कर्मचारीबाट वडा सचिवको पंञ्जिकरणको काम गर्न गराउनु पर्ने बाध्यता सार्है अप्ठयारो अवस्था सिर्जना भएको छ । एक कर्मचारीलाई विभिन्न शाखामा कामको जिम्मेवारी दिँदा समयमा काम सम्पन्न गर्न निकै गार्हो भएको छ । तथापी कर्मचारीलाई कार्यालयमै खाजाको व्यवस्थापन गरिएको छ । कार्यविधि नै बनाएर कर्मचारीलाई बढी समय काम गरेवापत ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाईएको छ ।
७. कर्मचारी ल्याउने बारे कहिँ कतै पहल गर्नुभएन ?
कर्मचारीको आकर्षणको लागि गरिएको प्रयास मथि नै उल्लेख गरियो । खास गरी हाम्रो जस्ता स्थानीय तह कर्मचारी समायोजनमा रोजाई नपर्नु नै समस्या हो भने लोकसेवा आयोगमा हाम्रा स्थानीय उत्पादन नहुनु अर्को समस्या हो । पहल गर्ने काममा कञ्जुस्याई गरिएको छैन तर समायोजनमा कर्मचारीले संघ, प्रदेश र सुगमका स्थानीय तह रोज्ने मौका पाउँदा समस्या सिर्जना भएको छ । यसको अर्थ कर्मचारीप्रति गुनासो पोखेको होइन तर राज्यले संघियताको सहि ढङ्गले कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी आवश्यक मात्रामा पठाउनुपर्छ । यदि केन्द्रले पठाउन नसके स्थानीय तहलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
८. केन्द्र सरकारको सहयोग कस्तो छ ?
माथिल्ला सरकारको सहयोग सकरात्मक नै छ । खास गरी भौतिक निर्माणमा सहयोग हुदै आएको छ । तर केन्द्र सरकारले समयमा कर्मचारी समायोजन प्रकृया नटुङ्गाएर थप कर्मचारीको भर्ना लोकसेवा मार्फत गर्ने कुरा छिटो गर्नु पथ्र्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन । जसले धेरै स्थानीय तह र केहि प्रदेशलाई कर्मचारी अभाव भएको हो । त्यसैलाई केन्द्र सरकारको असहयोग भन्नु पर्छ ।
९. जनप्रतिनिधिहरु ठेक्कापट्टामै संलग्न भए भन्ने गुनासो छ नि ?
जनप्रनिधिको बिचमा ठूलो भिन्नता छ । तपाईले भने जस्तै विभिन्न कुरामा रमाउने जनप्रतिनिधि छन् । गाउँपालिका अध्यक्षको हिसावले यो ५ वर्षमा मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ती मेरा कारणले थपियो भने मैले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ठहर्नुपर्छ र भष्ट्राचारी सावित हुनुपर्छ । त्यसैले मैले हाम्रो स्थानिय तह भित्र सवै जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो आचरण, स्वभाव, जीवनशैली सरल हुनुपर्छ भन्ने कुरामा निर्देशित गरेको छु । संघियता महङ्गो भयो भन्ने प्रश्न गरिरहेको वेला हामी भत्तामुखी र सुविधाभोगी भइयो भने यो लोकतन्त्र प्रति जनताको धारणा नकरात्मक हुन्छ ।
वास्तवमा गाउँको नागरिकले हाम्रा हरेक व्यवहार हेरेर संघियता संचालन प्रतिको धारणा बनाउने हुदाँ जनप्रतिनिधि पारदर्शी, अनुशासित र उच्च नैतिकता बोकेको हुनुपर्छ । ठेक्का पट्टाको प्रसङ्ग निकाल्नु भयो त्योत सोच्ने कल्पना गर्ने होइन । म त विदेश भ्रमणमा गएको आफूले नियामानुसार लिन मिल्ने भत्ता रु ४ लाख पनि नलिने जनप्र्रतिनिधि हो । हेर्नुस वास्तवमा दावाको साथ भन्न सक्छु म खुला किताव हुँ पढनुस र म प्रतिको धरणा बनाईदिनुस ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुई फरक फरक तरिकाले आएपनि एउटै उदेश्य जनताको सेवा मिलेर गर्नु हुन्छ । एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपदर्छ, एकले अर्काको पिर मर्का बुझ्नुपर्छ र सहयोगी बन्नुपर्छ भन्ने नीति अपनाईएको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच सुमधुर सम्बन्ध भएकै कारणले काममा सहज मिलेको छ ।
११. तपाईको कार्यकाल अवधिभर चन्द्रकोट गाउँपालिका बासिको मुहार कसरी फेर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
हाम्रो यो ५ वर्षे कार्यकालमा हामी स्थानीय सरकार संचालन विदाई हुदै गर्दा हाम्रा नागरिकमा चेतनाको विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा विभिन्न सूचकको वृद्धि गर्ने, नागरिकलाई पेशासँग जोडने, नागरिकलाई कर्तव्यवोध सहित अधिकार प्राप्तिको लागि उत्साह बनाउने, भौतिक निर्माणमा आशातित सफलता प्राप्त गर्ने र सवै नागरिकको नजरमा इमान्दार र परिश्रमका साथ ५ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेको आभाष दिनुपर्छ ।